Yotam: Ɔhaw a Ɛwɔ Fie Nyinaa Akyi no, Yotam Dii Nokware | Momfa Nkyerɛkyerɛ Mo Mma
SƐ ƆWOFO bi gyae nokware Nyankopɔn Yehowa som a, ebetumi ama ne mma abrɛ paa. Ma yɛnka Yotam ho asɛm. Yebehu ɔhaw a na ɛwɔ ne fie bere a na ɔyɛ abofra no.
Ná Yotam papa Usia yɛ Yuda hene; ɔno na na ɔwɔ tumi paa wɔ ɔman no mu. Ansa na wɔrewo Yotam no, na Usia adi ade mfe pii, na na ɔyɛ ɔhempa. Nanso akyiri yi, Usia bɛyɛɛ ahantan buu Onyankopɔn Mmara so; saa bere no, na Yotam yɛ abofra. Ɛno nti Onyankopɔn de ɔyarebɔne bi a ɛde kwata bɔɔ Usia. Wunim nea Yotam yɛe?— *
Yotam de, ɔkɔɔ so som Yehowa. Ebetumi aba sɛ ne maame Yerusa na ɔboaa no. Nanso, ɛbɛyɛ sɛ na ɛyɛ den ma Yotam sɛ obedi nokware ama Yehowa bere a ne papa Usia gyaee Yehowa som no.
Sɛ wo nso, wo papa anaa wo maame gyae Yehowa som a, dɛn na wobɛyɛ? Ɛbɛyɛ den ama wo paa, ɛnte saa?— Nanso ɛnyɛ bɔne sɛ wubedwen sɛ biribi saa betumi asi. Yɛhwɛ asɛm bi a Dawid kyerɛw wɔ Bible mu a, ɛma yehu sɛ biribi a ɛte saa betumi asi.
Ná Dawid papa Yese yɛ onipa pa. Ná ɔsom Yehowa, na yebetumi nso aka sɛ na Dawid dɔ ne papa. Nanso Dawid behui sɛ ɛsɛ sɛ ɔdɔ Yehowa sen Yese koraa. Momma yɛnhwɛ nea enti a yɛreka saa.
Bue wo Bible kɔ Dwom 27:10. Dawid kyerɛwee sɛ: “Sɛ me papa ne me maame mpo gyaw me a, Yehowa de, obegye me.” Dwen eyi ho hwɛ: Nea Bible reka wɔ ha no kyerɛ sɛ, sɛ Dawid papa Yese anaa ne maame gyae Yehowa som mpo a, ɔno Dawid de, ɔbɛkɔ so asom Yehowa.
Wo nso ɛ? Sɛ wo papa anaa wo maame gyae Yehowa som a, wobɛkɔ so asom Yehowa anaa?— Ɛho hia sɛ wubisa wo ho saa asɛm yi. Sɛ yebenya ho mmuae a, ma yɛnhwɛ Bible mu ahyɛde bi a ɛho hia yi. “Fa wo koma nyinaa ne wo kra nyinaa ne w’adwene nyinaa dɔ Yehowa wo Nyankopɔn.”
Saa ahyɛde yi kyerɛ sɛ, sɛ nneɛma mu yɛ den mpo a, ɛsɛ sɛ yedi nokware ma Yehowa. Wohwɛ a, hena na ɔpɛ sɛ yegyae Yehowa som?— Ɛyɛ Onyankopɔn tamfo Satan Ɔbonsam. Yesu frɛɛ no “wiase yi sodifo.” Bible san ka sɛ ɔyɛ “wiase yi nyame.” Ɛsɛ sɛ yesuro Satan anaa?—
Dabi, ɛnsɛ sɛ yesuro no. Mmom no, ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ Yehowa ho yɛ den koraa sen Satan. Sɛ yɛde yɛn ho to Yehowa so a, ɔbɛbɔ yɛn ho ban. Fa wo Bible kenkan sɛnea Yehowa bɔɔ Dawid ho ban fii ɔbran Goliat ho. Wo nso sɛ wudi nokware ma Yehowa a, ɔbɛbɔ wo ho ban.
Kenkan wɔ wo Bible mu
2 Beresosɛm 26:16-21; 27:1, 2
Yohane 12:31; 2 Korintofo 4:4
^ nky. 4 Sɛ worekenkan akyerɛ abofra na wuhu sɛ wɔasan baabi sei (—) a, ɛkyerɛ sɛ gyina na ma abofra no nkyerɛ n’adwene.